Tsy sitrana intsony ny rakitrao. Inona no azoko atao farany? - DataNumen
Mampiasa ny vokatra
Ahoana no hahalalana raha afaka manamboatra / mamerina ilay rakitra maloto ny vokatrao?
Tsy nahomby tamin'ny fanamboarana ny fisie nataoko tamin'ny vokatrao aho, nahoana?
Mahita bug momba ny vokatrao aho. Ny hatao?
Ahoana ny fomba hijerena raha ho sitrana irery ny rakitrao?
Tsy azo sitranina intsony ny rakitrao. Inona no azoko atao farany?
Te hanana fisehoan-javatra tsy misy amin'ny vokatrao aho. Ny hatao?
Ahoana ny fomba hamahana ny lesoka "Hizara fanitsakitsahana"?
Ny bara fandrosoana dia tsy miova (na miova miadana) ary mihamangatsiaka ny programa. Ny hatao?
Mila esoriko ve ny kinova demo alohan'ny hametrahana ny kinova feno?
Ahoana ny famongorana ny rindrambaiko?
Inona no mahasamihafa ny kinova demo sy ny kinova feno?
Azoko atao ve ny mampiasa ilay rakitra raikitra namboarin'ilay kinova fampisehoana, taorian'ny nahazoako ny kinova feno?
Inona no tokony hataoko aorian'ny nahazoana ilay kinova feno?
Azoko atao ve ny mampiasa ny lozisinao hanamboarana rakitra Mac maloto?
Ho sitrana amin'ny kinova feno ve ny angon-drakitra maro noho ny kinova demo?
Hafiriana no haharetan'ilay programa ataonao hanamboarana ny fisie?
Ahoana ny fanavaozana ny vokatrao?
Efa tafiditra ao ny rakitrao.zip na.rar endrika. Ahoana no ahafahana mametaka sy manafina azy indray amin'ny WinZip na MandresyRAR?
Miasa amin'ny MacOS ve ny programao?
Azoko atao ve ny mamoaka ny tahiry miorina amin'ny endrika Access 95/97?
DataNumen Outlook Repair/ Fanarenana ny fifanakalozana
Diso aho "Tsy tadidiko" rehefa manamboatra PST /OST fisie Ny hatao?
Maninona aho no tsy mahita ireo mailaka tadiavina na zavatra hafa ao amin'ilay fisie PST raikitra?
Misy entana tsy ilaina ao amin'ilay rakitra PST raikitra. Ahoana ny famongorana azy ireo?
Mamolavola ny fiara aho. Mbola azoko atao ve ny mamerina ny angon-drakoko Outlook?
Fa maninona no tsy misy ny vatan'ny hafatra naverina sasany?
Inona ny fahasamihafana DataNumen Outlook Repair ary DataNumen Outlook Drive Recovery?
Inona ny fahasamihafana DataNumen Outlook Repair ary DataNumen Exchange Recovery?
Maninona ny data sasany no tsy voavonjy?
Fa maninona no tsy mitovy amin'ilay natsangako ilay teny miafina sitrana?
Ahoana ny fanamboarana fisarahana zip rakitra?
Ahoana ny fanamboarana ny tsipelina zip rakitra?
Inona ny dikan'ilay toe-javatra azo averina ao amin'ny tatitra momba ny demo?
Maninona ny faritry ny daty ao amin'ny tahiry namboarina no namboarina ho 1900-01-01?
Maninona aho no mbola tsy afaka manokatra ilay raikitra DBF rakitra?
Nataoko clone ny sarin'ny C: drive. Ahoana ny famerenana azy io?
Ahoana ny fametrahana ny sary noforonin'i DataNumen Disk Image
Ahoana ny fomba hanafarana ny kinova feno amin'ny vokatra?
Inona no mitranga aorian'ny andefasako ilay baiko?
Tsy andoavan-ketra aho. Ahoana ny fomba hisorohana ny haba amin'ny varotra amin'ny baikoko?
Manome fihenam-bidy amin'ny fanabeazana ve ianao?
Ahoana no hamerenako ny volako?
Maharitra ve ny fahazoan-dàlana?
Firy ny solosaina ahafahako mametraka ny vokatrao?
Azoko atao ve ny mamindra ny fahazoan-dàlana amin'ny solosaina iray mankany amin'ny iray hafa?
Ahoana ny famoahana lisansa?
Manana fanontaniana / olana momba ny iray amin'ireo lahatsoratra bilaoginao aho. Ny hatao?
Azonao atao ve ny mampiditra backlink amin'ny tranokalako?
Raha feno zero ny rakitrao rehefa mampiasa io fomba io hijerena azy, dia tsy misy data azo averina ao anaty rakitrao. Aza matahotra anefa. Mbola misy mifanohitra hamerina ny angon-drakitrao, toy izao:
Ny kapila / fiara misy ny fisieo dia mety mbola misy angona azo sitrana ihany. Ho an'ny karazana data, toy ny Outlook na Outlook Express data, azonao ampiasaina DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery hijerena ny kapila / fiara ary hamerina azy io avy eo. Ho an'ny karazana data hafa, toy ny SQL Server angon-drakitra data, azonao atao ny mamorona sary voalohany ny kapila na mitondra miaraka aminao DataNumen Disk Image, avy eo ampiasao DataNumen SQL Recovery hijerena ny rakitra sary ary hanarenana angona ho anao.
Izay kapila / kapila na haino aman-jery fitahirizam-bokatra izay efa naka tahaka ny rakitrao, na efa nisy taloha ny rakitrao dia mety misy koa ny angona tadiavinao. Azonao atao koa ny mampiasa ny fomba mitovy amin'izany amin'ny vahaolana 1 hamerenana ny angon-drakitrao.
Azonao atao koa ny Mifandraisa aminay ary farito amin'ny antsipiriany ny fomba fanao amin'ny loza voaozona. Hodinihinay amin'ny tanana sy manara-maso tsara ny raharaham-pitsaranao raha mbola misy ny fahafaha-manangona data miaraka amin'ny fomba tsy nentin-drazana.
mihoatra ny fanarenana, kapila, sary kapila, fiara, fomba farany
Mbola mipetaka? Ahoana no ahafahantsika manampy?
Ahoana no ahafahantsika manampy?
Navoaka tamin'ny May 14, 2021
Ahoana ny fomba hijerena raha ho sitrana irery ny rakitrao?Te hanana fisehoan-javatra tsy misy amin'ny vokatrao aho. Ny hatao?